Iindaba -Iqela leBrocade lityhila i-China-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu yezoQoqosho nezoRhwebo I-Fair Fair kunye ne-Chengdu Special Cloud Fair
Ngo-Okthobha i-28th, u-Chengdu ubambe ngempumelelo i-China-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu yezoQoqosho nezoRhwebo I-Fair Fair kunye ne-Chengdu Special Cloud Fair. Esi siganeko siyinxalenye ebalulekileyo ye-2020 China-Europe International Trade Exhibition. U-Liu Xiaoliu, usekela-sodolophu kuRhulumente wase-Chengdu woRhulumente waBantu kunye neenkokheli ezinxulumene noko, Iinkokheli kunye neqela le-China Council kuKhuthazo loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe, i-ambassador yegqiza le-EU e-China, abameli bamashishini e-Chengdu kuqoqosho lwedijithali i-Brocade Artificial Intelligence Group kunye ne-Aotai Oogqirha baye kumsitho wokuvula umboniso. Ukubanjwa kwalo mboniso kubonakalise ukubaluleka kokudibana kwezoqoqosho nakwezorhwebo phakathi kweChengdu neYurophu kwisithuba sasemva kobhubhane, kwaye kuye kwafaka inkuthazo entsha yokuqhubela phambili kokusebenzisana phakathi kweChengdu neYurophu.
UGqirha Guo Sha, ongusihlalo weBrocade Artificial Intelligence Group, UNks. Hao Fang, umongameli, kunye neqela labancedisi kurhwebo lwamazwe aphesheya bathathe inxaxheba entlanganisweni, kwaye phambi kwentlanganiso, bathathe inxaxheba entlanganisweni neenkokheli URhulumente kaMasipala waseChengdu, iZiko lezoRhwebo leZizwe eziManyeneyo, amaSebe orhulumente waseTshayina kunye nakuMbindi naseMpuma Yurophu, imibutho yezoshishino kunye nabameli beshishini babenotshintshwano lobuhlobo.
U-Chen Jian'an, usekela-sihlalo we-China Council kwi-Promotion of International Trade, waya kumsitho wokuvula kwaye wenza intetho ngevidiyo. Kwintetho yakhe, u-Chen Jianan uvakalise umbulelo ongazenzisiyo kwiiyunithi ezifanelekileyo ze-China Council ye-Promotion of International Trade kunye ne-China Chamber of International Commerce ngenkxaso eyomeleleyo kunye nokuthatha inxaxheba. Umboniso ububanjelwe ukukhumbula isikhumbuzo seminyaka engama-45 sokusekwa kobudlelwane bezopolitiko phakathi kwe China kunye ne-EU kunye nokukhuthaza uphuhliso lwamazwe aseChengdu nawaseMbindi naseMpuma Yurophu.
U-Liu Xiaoliu, Usekela-sodolophu wase-Chengdu URhulumente waBantu, wazise ukukhula ngokukhawuleza kwe-Chengdu kwiindwendwe zase-China nakwamanye amazwe ngokunyanisekileyo kulo mboniso. Uye wathi uChengdu lubaluleke kakhulu kuqoqosho lwesizwe, itekhnoloji, ezemali, inkcubeko kunye nokuyila, utshintshiselwano lwangaphandle kunye nokudityaniswa kwamazwe jikelele okuchongwe liBhunga likaRhulumente. Iziko eliphambili, kunye nepaki kunye neqonga njengeliphetheyo, lazisa iiprojekthi zotyalo-mali ezinje ngezoqoqosho lwedijithali, imfundo ye-STEAM, isiseko sovavanyo kwezenzululwazi kunye netekhnoloji, ukhenketho lwenkcubeko kunye nobuchwephesha obuphezulu. UChengdu unethemba lokuba oosomashishini abavela kwihlabathi liphela baya kuthi bafune amathuba okusebenzisana noChengdu kwicandelo lokwenziwa kwezinto, amandla aluhlaza, izixhobo zonyango, indalo yenkcubeko, kunye nolungiselelo lwamanye amazwe, kwaye bafune uphuhliso lwamashishini aqhelekileyo kunye nenkqubela phambili edolophini.
Emva koko, uMmeli we-European Union e-China, u-Yu Bai, wathi i-China igqithile e-United States ukuba ibe lelona qabane likhulu lezorhwebo kwi-European Union okokuqala ukusukela ngo-2020. I-China kunye ne-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu amazwe anelungelo lawo. izibonelelo, ukuhambelana okunamandla kunye nethemba elibanzi lokusebenzisana. Umboniso we-China-Central kunye ne-Mpuma ye-Yurophu yezoQoqosho nezoRhwebo Fair, evunyiweyo liBhunga likaRhulumente kwaye yaququzelelwa liBhunga loKhuthazo loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe, ifumene ingqwalaselo enkulu kunye nokunakanwa kuluntu lwamashishini lwamazwe aphesheya. Njengelona qabane likhulu likaChengdu kwezorhwebo, iYurophu inethemba lokuba iinkampani ezivela kumacala omabini ziya kuthatha ithuba lokusebenzisana kwe "17 + 1" ukucofa ngokupheleleyo ukubanakho kwe "Belt kunye neNdlela" yentengiso enkulu. Yenza imeko yezoqoqosho nezorhwebo yamanye amazwe, joyina umsitho omkhulu kwaye ufune intsebenziswano.
Kwangelo xesha, i-2020 i-China iYurophu i-International Trade Digital Exhibition nayo yaqalisa kwangolo suku. Iinkampani ezingama-1,200 zaseTshayina kunye nabatyeleli abangama-12,000 abaqeqeshiweyo abavela eYurophu baya kuthatha inxaxheba kulo mboniso kwi-intanethi. Iinkampani ezingama-60 zaseChengdu ezivela kwicandelo lokwenziwa kwezinto ngobuchule, amandla aluhlaza, inkcubeko yedijithali kunye nobuchule bokuyila, izixhobo zonyango, izinto zokusebenza, njl njl, zavela kwiqonga lomboniso ledijithali leBhunga lase China loKhuthazo loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe. Iqela leBrocade liphinde labonisa kulo mboniso welifu nge-STEAM yemfundo enobuchule, imveliso eneenkcazo eziphezulu zeaudiyo kunye nevidiyo, iindawo zedijithali kunye nezinye iinkalo. Kudliwanondlebe, uGqirha Guo Sha wathi ukuthatha inxaxheba kweBrocade Group kulo mboniso ujolise ekukhuthazeni uphuhliso loqoqosho lwedijithali kaChengdu kunye nokusebenzisana kweqela kwimveliso yezorhwebo.
Kwintetho yakhe, u-Lu Yiji, ongusihlalo we-Digital Association, uthe uqoqosho lwedijithali lungene ngokuthe ngcembe kutyalo-mali nakurhwebo. I-China yeyona ntengiso inkulu ehlabathini ngokomthamo wentengiso, efikelela kwi-US $ 600 yezigidi kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, idlula iMelika, i-United Kingdom, iJapan namanye amazwe. Uthethathethwano olwenziwa kwi-Intanethi Urhwebo, ukuthenga, kunye nosasazo olwenziweyo kwi-Intanethi sele ziindlela ezixhaphakileyo. Itekhnoloji yedijithali izisa utshintsho kumzi mveliso kwaye ikhuthaza iindlela ezintsha zorhwebo. Sisisixhobo kwaye siya kuba sisimo sexesha elizayo esiya kuthi sixhamle abantu behlabathi.
Lo mboniso ububanjwe liBhunga lase China lokuKhuthaza uRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kunye noRhulumente waBantu waseChengdu, kwaye labanjwa yiChina Chamber of Commerce yamanye amazwe, iBhunga lase China loKhuthazo loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe (China Chamber of International Ukukhuthaza urhwebo notyalo mali eYurophu ifikelele kwinqanaba elitsha.